I-disc granulator ekwabizwa ngokuba ngumatshini wokwenza ibhola, sesinye sezixhobo eziphambili kwimveliso yemveliso yezichumiso kunye nomgca wemveliso yezichumiso. I-engile yediski ye-disc granulator yamkela ubume be-arc, kwaye ireyithi yegranulation iphezulu. I-disc granulator ixhotywe ngamachweba amathathu okukhutshwa. Isinciphisi kunye nemoto ye-disc granulator iqhutywa ngamabhanti aguqukayo, anokuqala kakuhle, ukunciphisa amandla eempembelelo kunye nokwandisa ubomi benkonzo ye-disc granulator. Ezantsi kwe-granulator yediski yomelezwa ngeepleyiti zensimbi eziqaqambileyo ezininzi, eziqinileyo nezomeleleyo. Uyilo oluqinileyo, olunzima kunye nolomeleleyo lwediski ye-disc ayifuni i-anchor bolts ukuyilungisa, kwaye isebenza kakuhle.
Idiskhi granulator idla ngokubizwa ngokuba umatshini pelletizing, disc disc pelletizing, disc umatshini pelletizing, njl Umatshini disc pelletizing ikakhulu ilungele powder, izinto granular ezincinane okanye izinto block ezincinane. Ayifanelekanga i-pelletizing yeplastiki kunye nezinto ezilahlwayo zebhokisi yesidlo sasemini, ezinje ngomgubo wamalahle, isamente, iklinikhi, isichumisi semichiza, njl.I-angle yokuthambeka kwediski ye-disc granulator inokuhlengahlengiswa ngumsebenzisi, kunye noluhlu lokuhlengahlengisa iphakathi kwama-35 ° nama-55 °.
I-disc granulator yenziwe ngeplate enkulu, igiya enkulu, icandelo lokuhambisa, isakhelo, isiseko, i-rack scraper, kunye ne-scraper.
I-disc granulator inezibonelelo zobungakanani be-pellet efanayo, ukusebenza okuzinzileyo, ubomi obude benkonzo, isakhiwo esilula, ukuphakama okuphantsi, kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokugcinwa.
I-LAB MINI IDISKITI YENKQUBO
Xa kuthelekiswa negranulator esetyenziswe kwimveliso yokuvelisa, i-disc yegrafu yelebhu inamandla afanayo e-granulation kunye nezixhobo zokusebenza, ngaphandle kokuba ubukhulu bediski yegrafu yelebhu incinci (500mm), kodwa umsebenzi wayo ulungile, ubumbene kwaye uzinzile . Ukusebenza kakuhle (akukho mfuneko yokulungiswa, kunokufakwa ngqo etafileni), ixhotyiswe ngombane we-380V kunye ne-220V yamandla abasebenzisi ukuba bakhethe.
Chwetheza YZ1800 YZ2500 YZ3000 YZ3600
Disk ubukhulu 1.8m 2.5m 3m 3.6m
Isantya sokusebenza 21rpm 14rpm 14rpm 13rpm
amandla 3kw 7.5kw 11kw 18.5kw
Ubukhulu 2x1.7x2.13mm 2.9x2x2.75m 3.4x2.4x3.1m 4.1x2.9x3.8
Umthamo 0.8-1.2t / h 1.5-2.0t / h 3-4t / h 4-5t / h